Mkpado: 2015 | Peeji nke 2 nke 5 | Martech Zone
Ndị ahịa Kenshoo na-eme mkpọsa ahịa dijitalụ na-agba ọsọ n'ihe karịrị mba 190 ma gụnyere ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ọkara nke Fortune 50 gafee 10 netwọọdụ mgbasa ozi mgbasa ozi zuru ụwa ọnụ. Nke ahụ bụ ọtụtụ data - ma nwee ekele na Kenshoo na-ekerịta data ahụ na anyị na otu ụzọ n'ụzọ anọ iji hụ mgbanwe ndị na-agbanwe agbanwe. Ndị ahịa na-adabere na ngwaọrụ mkpanaka karịa oge ọ bụla, ndị ahịa ọkaibe na-agbaso uwe na mkpọsa kachasị elu nke na-eweta nsonaazụ ọma na ma
Ndị isi ntọala ahịa azụmaahịa bụ na ị nwere ike nyochaa ma gụọ usoro atụmanya dabere na myiri na ndị ahịa gị. Ọ bụghị atụmatụ ọhụrụ; anyị ejirila data mee ihe ruo iri afọ ole na ole ugbu a iji mee nke a. Otú ọ dị, usoro ahụ na-agwụ ike. Anyị jiri ngwaọrụ wepụ, mgbanwe na ibu (ETL) iji wepu data sitere na isi mmalite iji wuo akụ na-etiti. Nke ahụ nwere ike were izu iji mezuo ya, ma na-aga n'ihu
4dị XNUMX Kachasị Mmetụta N'afọ a na Ọdịnaya Dijitalụ
Anyị nwere obi anụrị maka webinar anyị na-abịa na Meltwater na Ọdịnaya na njem ndị ahịa. Kwere ya ma ọ bụ na ọ bụghị, ahịa ọdịnaya nwere ma na-aga n'ihu na-agbanwe. N'otu akụkụ, omume nke ndị ọrụ agbanweela etu esi eri ọdịnaya yana otu ọdịnaya si emetụta njem ndị ahịa. N'akụkụ nke ọzọ, ndị na-ajụ ase agbanweela, ikike iji tụọ nzaghachi, yana ike ịkọwapụta ewu ewu nke ọdịnaya. Jide n'aka na ị debanyere aha
Irè obere azụmaahịa nke ndị ahịa dị obere
Pasent 70 nke ndị ahịa na-ahọrọ inweta ozi gbasara ụlọ ọrụ site na ọdịnaya kama site na mgbasa ozi. Pasent 77 nke obere azụmaahịa na-etinye ego n'ime usoro azụmaahịa ọdịnaya iji tọghata ndị ọbịa n'ịntanetị n'ime ndị ahịa. Isi okwu bụ: Clicks from Shared Content nwere okpukpu ise karịa nwere ike ibute nzụta! Na mpụga nke oge, ịre ahịa ọdịnaya abụghị ụzọ dị oke ọnụ iji kwalite azụmahịa gị. The ọtụtụ ndị bụ isi nke